သင့်ရဲ့တင်ပြမှုစွမ်းရည်ကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်မလဲ - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on February 22, 2016 at 11:35 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို တင်ပြဆွေးနွေး ရမှာပါ။ အဲဒီတော့ ဘယ်လို အချက်တွေကို ဂရုပြုလိုက်နာလိုက်မယ်ဆိုရင် ပိုမိုထိရောက်တဲ့ တင်ပြမှုတွေဖြစ်မလဲ ဆိုတာကိုတော့ သိထားဖို့လိုပါတယ်။ Presentation တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် Presentation မစတင်မှီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရယ်၊ Presentation လုပ်နေတဲ့ အချိန်တွင်းရယ်၊ Presentation ပြီးတဲ့နောက်ဆိုပြီး သုံးပိုင်းသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ လူအများစုကတော့ လူအယောက် ၄၀၊ ၅၀ ဒါမှမဟုတ် လူဦးရေ ၁၀၀ လောက်ကို Present လုပ်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင် ဒီအပိုင်းသုံးခုကို ဂရုစိုက်ကြပေမယ့် လူ ၅ ယောက်၊ ၁၀ ယောက် ဆိုရင် သေချာ ဂရုမစိုက်ဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တကယ့်ကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်သူကတော့ ရှားပါးလွန်းပါတယ် ပြီးတော့ Present လုပ်တာကောင်းတဲ့သူတွေကလည်း ထိုရှားပါးသောသူများဖြစ်ပါတယ်။
တင်ပြမှုတစ်ခု မစတင်မှီ သင့်အနေနဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ့် အရာတွေရှိပါတယ်။ ထိုအရာတွေကို သေချာပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့တင်ပြမှုစွမ်းရည်ကိုကောင်းကောင်းမြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့……
About of the presentation (တင်ပြမည့်အကြောင်းအရာ): သင့်အနေနဲ့ ဘာခေါင်းစဉ်၊ ဘာအကြောင်းအရာကို တင်ပြမှာလည်း သင်ကိုယ်တိုင်ရှင်းလင်းတိကျနေရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သင်တင်ပြမည့်ခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို စုဆောင်းထားရန်နှင့် တင်ပြမှုတွင်အသုံးပြုမည့် အကိုးအကား ဓာတ်ပုံများ၊ ဇယားများ ကိုလည်း အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ထို့အပြင် မိမိတင်ပြမှုကိုတက်ရောက်မည့်သူတွေက ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ၊ ပညာအရည်အချင်းက ဘယ်လောက်လဲ၊ သူတို့ရဲ့ Background ကိုအကြမ်းဖျဉ်း သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ သင် Presentation လုပ်မည့်နေရာ (သို့) အခန်း အနေအထား၊ အကျယ်အ၀န်း၊ တက်ရောက်မည့်အရေအတွက်နဲ့ အဆင်ပြေမှုရှိ၊ မရှိ ဒါတွေအားလုံး သိပြီဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ ပြောချင်သော အကြောင်းအရာကို အစီအစဉ်အလိုက် စဉ်ထားပြီး ဒီတင်ပြမှုရဲ့ အဆုံးမှာ ဘာကိုသိသွားစေချင်တာလဲဆိုတာကို Power Point slideshow (သို့) Flipchart နှင့်ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါတွေအပြင် သင့်ရဲ့ Presentation ကိုနားထောင်နေသူတွေမှ မေးလာနိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို သင့်အနေနဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Time Frame (အချိန်အကန့်အသတ်): သင်တင်ပြဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ရမှာလည်း ဆိုတာသိထားပြီး သင့်အနေနဲ့ ထိုအချိန်အတွင်းမှာ သင်တင်ပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ထိမိအောင်တင်ပြနိုင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်တင်ပြဖို့ အချိန်တစ်နာရီ ရတယ်ဆိုပြီး တစ်နာရီအတွက် ပြင်ဆင်လာပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင်း မိမိရတဲ့အချိန်က မိနစ် ၃၀ လောက်ပဲဖြစ်နေရင်တော့ အဓိကကျတဲ့အချက် တွေကို အလေးထားပြီးတော့ တင်ပြဖို့လိုပြီး အရာအရာတိုင်းကို ပါအောင်အများကြီးတင်ပြမှုကို ရှောင်ရမှာပါ။ အဲဒီတော့ သင့်ရဲ့တင်ပြမှုအချိန်နဲ့ ကိုက်ညီမဲ့ တင်ပြမှု မျိုးကိုသာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။
Practice (ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခြင်း): Presentation တစ်ခုအတွက် ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာ အခြားအရာတွေကိုလူတိုင်း ပြင်ဆင်ပေမယ့် ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခြင်းကို လူအနည်းစုပဲပြင်ဆင်ပြီး ထိုလူနည်းစုကပဲ ကောင်းမွန်တဲ့တင်ပြမှုကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခြင်းအားဖြင့် အဆင်မပြေဖြစ်လာနိုင်တာတွေ၊ အစီအစဉ်မကျဖြစ်နေတာတွေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ မြင်သာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ ကြိုတင်လေ့ကျင့်ခြင်းကြောင့် တကယ့် တင်ပြမှုတွင်ပိုမို အသက်ပါပြီး မိမိကိုယ့်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတိုးတက်စေပါတယ်။
Opening Speech (အဖွင့်စကား): သင့်တင်ပြမှုတစ်ခုလုံးရဲ့ အစဖြစ်တဲ့အတွက် လူအများစုက အဖွင့်စကားကို အရမ်းအလေးထား အာရုံစိုက်ပါတယ်။ သင်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ သင့်ရဲ့တင်ပြမှုပြီးဆုံးသွားချိန်မှာ ဘာတွေလေ့လာလိုက်ရမယ်၊ခံစားလိုက်ရမယ်၊ ဘာတွေသိလိုက်ရမယ်ဆိုတာကို သင့်ရဲ့အဖွင့်စကားကနေဖော်ပြဖို့ လိုပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီအဖွင့်စကားမှာပဲ သင့်ကိုယ်သင် နှင့် သင်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို တက်ရောက်လာသူများ ထံကို ထိထိမိမိ မိတ်ဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့် လူအများရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကိုရယူနိုင်ပါတယ်။
Control your voice (သင့်ရဲ့အသံကိုထိန်းချုပ်ပါ): တက်ရောက်လာသူများကို ရှင်းလင်းတဲ့ Message တွေပေးနိုင်ဖို့ အတွက် သင့်ရဲ့အသံကိုကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အသံက အရမ်းတိုးနေလား၊ ကျယ်နေလား ပြီးတော့ နားထောင်နေသူတွေနားလည်နိုင်ဖို့အတွက် အရမ်းမြန်နေလား ဒါမှမဟုတ် သင့်ရဲ့အသံဟာ အနိမ့်၊အမြင့်မရှိ တောင့်တောင့်ကြီးဖြစ်နေလား ဆိုတာတွေကိုဆန်းစစ်ပြီး ကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ Volume, Speed and Tone ဒီသုံးခုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရင် လူတွေက သင့်အသံမှာ စီးမျောသွားမှာပါ။
Body Language (ကိုယ်ဟန်အမူအရာ): တကယ်လို့မဖြစ်မနေ Podium (စကားပြောစင်) နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တောင်မှ သင့်ရဲ့လက်တွေ၊ မျက်နှာအမူအရာတွေကို ကောင်းကောင်းမြင်နေရမှာပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ Podium ရဲ့နောက်မှာ မနေတာကပိုကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ သင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာ သင်ဘယ်လောက်ယုံကြည်မှုရှိတယ်၊ ဘယ်လောက် ပြင်ဆင်ထားတယ် ဆိုတာတွေကိုမြင်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်ကိုယ်ဟန်အမူအရာတွေဟာ နားဆင်သူတွေရဲ့ ငြီးငွေ့မှုတွေကို ဖယ်ဖျောက်နိုင်ပါတယ်။ အလွန့်အကျွံ ကိုယ်ဟန်အမူအရာတွေများရင်တော့ သင်ဘာအကြောင်း တင်ပြ သွားလဲဆိုတာထက် သင့်အမူအရာတွေကဘယ်လိုဆိုတာကိုသာ မှတ်မိသွားမှာပါ။
Closing Speech (အပိတ်/အဆုံးသတ် စကား): တင်ပြမှုတစ်ခုလုံးမှာပြောလာသမျှစကားတွေကို ထိမိတဲ့စကားလုံး များကို ရွေးချယ်ပြီး အနှစ်ချုပ်ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှ ဒီတင်ပြမှုတစ်ခုလုံးမှာ သင်ပြောချင်တာက ဒီအကြောင်းအရာ ပါလား ဆိုတာကို တက်ရောက်သူတွေသေချာ သိသွားမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘယ်သူမှ သင့်တင်ပြမှု တစ်ခုလုံးမှာ အချိန်ပြည့်အာရုံမစိုက်နိုင်ပါဘူး သူတို့အာရုံမစိုက်မိတဲ့အချိန်မှာ သင်ပြောခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကို အပိတ်စကား မှာ အနှစ်ချုပ်သိသွားအောင် သင့်အနေနဲ့ ပြုလုပ်ပေးနိုင်မှ သင့်တင်ပြမှုကို နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင် တက်ရောက်သူများအနေဖြင့် သင့်တင်ပြမှုအဆုံးမှာ မေးစရာမေးခွန်းတွေရှိနိုင်ပါတယ် ဒါ့ကြောင့် သင့်အနေဖြင့် မေးစရာမေးခွန်းတွေရှိလားလို့ ဖိတ်ခေါ်ဖို့ လိုပါတယ်။ တက်ရောက်သူများ၏ မေးခွန်းက သင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မေးခွန်းဖြစ် နိုင်သလို၊ ကြိုတင်မပြင်ဆင်ထား သော မေးခွန်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကြိုတင်မပြင်ဆင်ထားသောမွေးခွန်းဖြစ်နေလျှင် သင့်အနေဖြင့် လိမ္မာပါးနပ်စွာ ဖြေဆိုပြီး လှပစွာ အဆုံးသတ်ပါမယ်။
Observation (သတိဖြင့်စောင့်ကြည့်ခြင်း): Presentation တစ်ခုလုံးမှာ သင့်အနေနဲ့ တက်ရောက်သူများရဲ့ အမူအရာ၊ တုန့်ပြန်မှု (အိပ်ငိုက်နေလား၊ အချင်းချင်းစကားပြောနေလား စသည်) တို့ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သင့်လိုအပ်ချက်ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက် Presentation မှာ ဒီထက်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ဘာတွေကြိုပြင်ဆင် ဖို့လိုလည်းဆိုတာကိုလည်း သိသွားမှာပါ။
Listening (နားထောင်ခြင်း): နားထောင်ခြင်းဆိုလို့ ရှေ့ကတင်ပြနေသူသင့်အနေနဲ့ ဘာတွေကိုနားထောင်နေရမှာ လဲလို့ မေးနိုင်ပါတယ်။ ဘာတွေကိုနားထောင်ရမှာလည်းဆိုရင် သင့်ရဲ့တင်ပြမှုအပြီးမှာ တက်ရောက်သူများအချင်းချင်း ပြောဆိုသော အသံကို နားထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် (တစ်ခါတစ်လေ နားထောင်ဖို့အဆင်မပြေပါ) ။
Review and Feedback (ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် တုန့်ပြန်မှုပေးခြင်း): Presentation တစ်ခုပြီးတိုင်း သင့်ကိုယ်သင် ပြန်လည်ဆန်းစစ် ခြင်းပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ရိုးသားစွာ အမှန်ကိုမြင်အောင် ဆန်းစစ်နိုင်လျှင်သင့်အနေဖြင့်နောက် presentation မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ ပြီးတော့ သင့်မိတ်ဆွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တစ်ယောက်ယောက်ကို သင့် Presentation နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ဘယ်နေရာလေးတွေလိုနေလည်း၊ ဘာတွေတော့ ဖြုတ်ပြီး ဘာတွေထပ်ဖြည့်လိုက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကို တုန့်ပြန်မှုတောင်းခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့တင်ပြမှု စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ Feedback ပေးမယ့်သူဘယ်သူမှ မရှိရင်လည်း သင့်ကိုယ်သင် မညာတမ်းပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ အချက်ကလေးတွေကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့တင်ပြမှုစွမ်းရည်ကို အများကြီး တိုးတက် စေနိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အချက်အကုန်လုံးကိုမလိုက်နာနိုင်ခဲ့ရင်တောင် သင်လိုက်နာနိုင် သလောက် လိုက်နာမယ်ဆို ရင် အခြားလူများထက်သာတဲ့ Presentation တစ်ခုကိုလုပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
(ဖြိုးမင်းသူ - BGL)
Permalink Reply by Yin Min Htwe on February 23, 2016 at 9:58
Permalink Reply by htaylim on February 23, 2016 at 11:47
Permalink Reply by Aung Zaw Myint on February 23, 2016 at 13:28
This is very useful for me. Thank you so much for share.
Permalink Reply by Nyein Chan Maung on February 25, 2016 at 22:12
Permalink Reply by aungzawoo on April 9, 2016 at 23:27